Tantara: Nanomboka ny Fiainana Mafy Iray - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
NAHITA fahasahiranana maro i Adama sy Eva tany ivelan’ny zaridainan’i Edena. Tsy maintsy niasa mafy izy mba hahazoana sakafo. Ho solon’ny hazo ﬁhinam-boa tsara tarehy, dia tsilo sy hery no hitany naniry nanodidina azy. Izany no nitranga rehefa tsy nankatò an’Andriamanitra i Adama sy Eva ka nitsahatra tsy ho sakaizany.
Nefa ny mbola ratsy noho izany, dia nanomboka nihamaty i Adama sy Eva. Tsarovy fa Andriamanitra dia nampitandrina azy ireo fa ho faty izy raha mihinana ny voan’ny hazo iray. Tamin’ny andro izay nihinanany àry dia nanomboka nihamaty izy. Endrey ny hadalan’izy ireo noho ny tsy ﬁhainoana an’Andriamanitra!
Raha mba nankatò an’i Jehovah mantsy i Adama sy Eva, dia ho nanana ﬁainana sambatra izy sy ireo zanany. Tokony ho velona mandrakizay tao anatin’ny fahasambarana teto an-tany izy rehetra. Tsy tokony ho nisy olona antitra, marary ary maty.
Nanao ahoana ny ﬁainan’i Adama sy Eva, rehefa tsy tao amin’ny saha Edena intsony izy ireo?
Ho nanao ahoana ny ﬁainan’i Adama sy Eva sy ny zanany, raha nankatò an’i Jehovah izy ireo?
Lasa nanao ahoana ny ﬁainan’i Adama, rehefa voaozona ny tany? (Gen. 3:17-19; Rom. 8:20, 22)
Ahoana no ahitana fa mbola naneho ﬁheverana an’i Adama sy Eva foana i Jehovah, na dia taorian’ny nanotan’izy ireo aza? (Gen. 3:7, 21)